OWONA MHLOBISO MHLE WOMTSHATO WASERUSTIC ONOKUWUTHENGA NGOKU - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Iziqwenga ezingama-25 zeRustic zoMtshato onokuzithenga ngoku
Misela imeko ngezi zimvo zothando. Umfoti webali, Isiseko, Imitshato kunye neMicimbi
Ukuhlaziywa kuka-Mar 12, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Xa unomfanekiso umtshato we-rustic-themed Kusenokwenzeka ukuba ucinga ngezibane zomtya, i-burlap, iingqayi zeMason kunye neentyatyambo ezimnandi. Ngelixa i-rustic yomtshato yomtshato ngokuqinisekileyo iguqukile kule minyaka idlulileyo, ezinye izinto ziye zahlala zinjalo. Umtshato we-rustic umalunga nokucoceka, ukubuyela umva, kunye nokuhombisa kudlala indima ebalulekileyo ekuziseni olu hlobo ebomini. Unokucinga ukuba umxholo we-rustic ulungele ukutshata, kodwa akunjalo. Obu bugcisa bunokusebenza kumaxesha onyaka nakwiindawo ezahlukeneyo, ukusuka ehlotyeni Umtshato welizwe ngokuhlwa kobusika obumnandi.
Emva kokuba uqeshe abathengisi bomtshato, sebenza neqela lakho ukuyila usuku lwakho olukhulu. Baza kubonelela ngezinto zethikithi enkulu, ezinje ngeziko eliphakathi, iarch yomsitho okanye irente yefenitshala yokwamkela. Emva koko, faka isitayile kwindawo yomtshato wakho ngakumbi ngokuthenga umhombiso womtshato werustic uwedwa. Nokuba ii-accents ezincinci zinokuyiguqula imbonakalo yomtshato wakho. Ukukunceda ukuba uqalise, siqokelele ezona zinto zibalaseleyo zokuhombisa umtshato onokuzithenga ngoku. Nokuba ujonge isitandi sekhekhe leenkuni okanye imiqondiso yesiko, le mihombiso yomtshato iyinto oyifunayo ukuze uphumeze umxholo wakho wothando.
Abathandekayo baya kufuna ukwabelana ngeminqweno emihle kunye neengcebiso zomtshato, ke khetha indawo yencwadi yeendwendwe kwindawo yakho yokwamkela umtshato. Ukuba ujonga into yoyilo, zininzi ezizodwa incwadi yeendwendwe ezizezinye , njengale bhokisi yomnqweno womtshato weplanga. Beka etafileni enephepha kunye neepeni zeendwendwe zokwabelana ngeengcinga zazo. Unokhetho lokwenza iglasi yakho ibe yeyakho kunye ne-monogram yakho kunye nomhla womtshato.
Ivenkile yeKnot Ibhokisi yomnqweno womtshato womntu okhethiweyo, i- $ 45,
Kuphantse kube nzima ukuphoswa zizibane zomtya xa ukhangela izimvo zokuhombisa zomtshato. Iibhalbhu eziveziweyo ziya kwenza ukukhanya komtshato kwindawo yakho yomtshato, nokuba uthi 'ndiyayenza' emtshatweni wesitali okanye kwifama ebukekayo.
Lampat Izibane ezingama-25 zeenyawo zomhlaba kunye nezibane, $ 14, Amazon.com
Iibhotile zeglasi ezimhlophe ziya kwenza umhombiso womtshato we-rustic. Gcwalisa ngeentyatyambo zakho ozithandayo, njenge-boho pampas ingca, ukuphefumla komntwana, i-delphiniums okanye i-sprigs ye-greenery efana ne-eucalyptus okanye amagqabi omnquma. Ubume obahlukeneyo kunye nobukhulu buya kujongeka bukhulu kwiitheyibhile zakho okanye ecaleni kwendlela indlela yomtshato . Yibophe i-burlap okanye i-twine ejikeleze iintamo ukuze uthinte i-rustic touch.
Ivenkile yeKnot Ukuhonjiswa kwebhotile yeglasi kusetwe eMhlophe, i $ 26 ye3,
Nika iindwendwe zakho into emnandi ukuyenza kulwamkelo ngokulungiselela indawo yemifanekiso eneepropu kunye nemvelaphi. Thenga le ntambo yezikhonkwane zentliziyo ukuxhoma ikhamera, ngaloo ndlela unokubona zonke iifoto abazithathayo ngokuhlwa.
Ukhuthazwe nguAlma izikhonkwane zentliziyo ngomthi, $ 11, Etsy.com
Enye yeendlela ezilungileyo zokuzisa i-rustic kwi-reception yakho kunye nabagijimi beetafile ze-burlap. Esi sigqubuthelo sendalo sisisitrato sobuhle be-rustic, kwaye siyakongeza ubume kwizakhiwo zeentyatyambo kunye namakhandlela.
Ivenkile yeKnot umgijimi weetafile ze-rustic kwi-Natural, $ 9,
Onke amehlo aya kuba kwikhekhe lakho lomtshato xa wena ne-S. Sika isilayi sokuqala, ke musa ukulibala ii-rustic accents ukuhombisa into oyithandayo. Siyayithanda le rustic Ikhekhe lomtshato -Lucingo olulula luneemvakalelo zale mihla, kodwa utolo longeza uphawu lwakudala.
Le Rustic Chic utolo kunye neenqobo zokuqala zerhasi zerhasi, $ 25, Etsy.com
Uninzi lwezimvo zokuhombisa umtshato kulula ukuba zenziwe nge-DIY. Nokuba uceba ukwenza eyakho itafile yenani lezinto ezisembindini okanye ezinophawu, unokwenza ezi ziqwenga zokuhombisa ngeefreyimu zemifanekiso. Kwaye, ukuba utyala imali kwizakhelo ngoku, uya kuzisindisa umsebenzi osele utshatile . Sebenzisa la mafreyimu ukwenza udonga lwegalari lwakho oluthandayo iifoto zomtshato emva kosuku olukhulu.
Isakhelo Isakhelo sodonga lwegalari encinci iMall, $ 449 kwizakhelo ezili-12, Isakhelo.com
Usuku lwakho lomtshato luya kuba lolona suku lubalaseleyo, kutheni ungahombisi ngokufanelekileyo? Le bhanna ye-burlap ibukeka ngathi intle ngaphezulu kwebar yakho yedessert okanye kwitafile yesithandwa.
Ivenkile yeKnot Olona suku lubalaseleyo kwi-burlap bunting yendalo, $ 8,
Njengokuthambisa ikhekhe, ukuma inokwenza nefuthe lokubonwayo. Ukujonga okwenyani kwe-rustic, jonga isitampu somthi okanye ibhokisi yeplanga yokubonisa ukonwaba kwakho.
Isiqwenga seentyatyambo Indawo enkulu yekhekhe leenkuni, ukusuka kwi- $ 25, Etsy.com
Sithandekile kule ngcamango yokuhlobisa umtshato. Umqondiso webhodi ebhodini uhambelana nobuhle be-rustic, kwaye le ncwadi indala yokundwendwela iya kufumana ingqalelo emtshatweni wakho.
Yenziwe I-rustic incwadi yeendwendwe zomtshato, ukusuka kwi- $ 29, Etsy.com
Iindwendwe ezithe ngqo ezihlalweni zazo nala makhadi okuhambisa amakhadi. Olu seto lukhulu luza namakhadi aneenkcukacha ezimhlophe ze-laurel, ezikushiya nomsebenzi omncinci ekufuneka uwugqibile-bhala nje amagama eendwendwe oza kwenziwa. (Okanye, jongana nomhlobo wakho we-calligraphy-obsesses ngokubhala igama lomntu wonke.)
UWinlyn i-rustic yamaphepha okubamba amakhadi ngocingo lwe-swirl, i- $ 15 ye-30, Amazon.com
Kunzima ukuthetha ngemibono ye-rustic yomtshato ngaphandle kokukhankanya iingqayi zeMason. Ukuba ucwangcisa ukuhombisa iitafile zomtshato wakho ngezi glasi zidumileyo, banike uhlaziyo ngezibane ezincinci ngaphakathi. Ezi jagi ziza nezibane ezisebenza ngebhetri ukukhanyisa indawo yakho.
Uyilo lweStellar Lane Izibane zemason jar ebusuku, ukusuka kwi- $ 17, Etsy.com
Ukuhonjiswa kweentaka zeentaka kuya kunika amantombazana akho e-rustic avakale. Gcwalisa ingaphakathi ngokuphefumla komntwana, izibane zeti okanye amakhandlela ukwenza umxholo womtshato we-chic shabby.
Ivenkile yeKnot iklasi yokuhombisa yeentaka ezihonjisiweyo e-Ivory, $ 50,
Ngaba ujonge umhombiso womtshato omangalisayo? Beka izibane zeenkuni ecaleni kwendlela yakho yomsitho okanye kwiitafile zokwamkela. Olu hlobo luvela kwi-Etsy luza ngaphandle kwekhandlela okanye iintyatyambo, ke sebenza kunye neentyatyambo zakho kumalungiselelo esimbo ahambelana nomxholo wakho.
I-GFT Woodcraft i-rustic lantern yendawo ephambili, i- $ 27, Etsy.com
Thenga ezimbalwa ezi ndwangu zetheyibhile zinokufikeleleka ukuze uzisebenzise kwiitafile ezibalulekileyo kulwamkelo lwakho, njengebhari, itafile eswiti okanye isitendi se-DJ. Iimpawu ezincinci zeleyisi ziya kunika indawo yakho i-antique vibe enencasa.
Indlu yaseLuoluo Indlu yetafile yelinen yasekhaya yeediliya, $ 13, Amazon.com
Ukuba wenze i-hashtag yomtshato wesiko, yazisa iindwendwe ngeempawu zebhodi ebhodini. Yenza imigca esezantsi yolu phawu ukuze iindwendwe zazi ukuba zithunyelwe njani kwi-Instagram.
Ivenkile yeKnot Owu Snap! uphawu lwebhodi yomtshato yesiko, $ 23,
Ukuba ufuna ngaphezulu ukuhonjiswa komtshato ongaphandle, qwa lasela izibane ezizezinye ezinje ngale set. Endaweni yeebhalbhu zeglasi, le strand ine-bistro-ephefumlelweyo yokugubungela ucingo.
Ivenkile yeKnot Ukuhombisa iibhetri zokuqhuba umtya we-LED kwi-Wire Bistro, $ 15,
Ungalibali ukujonga indlela yokuhombisa umtshato ngendlela efanelekileyo. Ngelixa imihombiso inokutshintsha indawo yakho, uya kuzonwabisa ngokwenene kwiindwendwe ukuba yonke imiba yosuku lwakho lomtshato ilingana nomxholo, kubandakanya izinto ezingathandekiyo ezinje ngesilivere kunye nezixhobo zokusebenzela. Siyayithanda le khekhe yomtshato esetiweyo, eza nemela yekhekhe kunye neseva esongelwe ngetayi ngamagqabi eucalyptus.
Ezo ntsuku I-rustic eucalyptus ikhekhe lomtshato likhonza iseti, ukusuka kwi- $ 30, Etsy.com
Iibhendi okanye ukukhanya kwezibane zangoku yindlela elula yokuhombisa ngentla, kodwa ayisiyiyo kuphela indlela onokuthi ukhethe ngayo. Kwinto ethile eyahlukileyo ngakumbi, jonga isihloko sephepha lepom pom pom. Iseti yesiqwenga se-10 iza ngombala we-rustic kwaye ungasetyenziselwa ukuhombisa isilingi yendawo yakho. Ngomtshato ongaphandle, fakela olu fakelo lwewimsical kwitafile yakho yokubonisa okanye ngasemva kwendawo yakho yemifanekiso.
AllHeartDires Isiqwenga se-10 sephepha lephepha lepom pom pom, $ 11, Amazon.com
Nokuba eyakho umtshato womtshato ungaba nayo umxholo we-rustic . Yiya ngesipho esisebenzayo esifana neicooler can, esiya kuthi sisetyenziswe kusuku lwakho lomtshato nangaphaya. Siyaluthanda olu uyilo lwesiko, olunendawo yokukhanya yokukhanya.
Ivenkile yeThutyana I-rustic inokupholisa ukuthanda umtshato, ukusuka kwi- $ 13, Etsy.com
Nguwuphi umtshato we-rustic ngaphandle kwe-succulents? Sukuba noxinzelelo malunga nokugcina izityalo ziphila kwaye zisempilweni kwiiveki ezikhokelela emtshatweni wakho — le seti yefeksi yesithandathu iya kwenza iqhinga.
Ivenkile yeKnot Izityalo ezincinci ezinamanzi amnandi, $ 22 nge-6,
Ukuba ujonge iprojekthi yoyilo ye-DIY, yenza isiko langemva kwesiko lakho okanye itafile yesithandwa. Siyayithanda imbono yokuxhoma izibane zomtya wamakhethini ngasemva kwe-gauzy tulle okanye edibene nokuxhonywa kwemiqolo eluhlaza.
Ivenkile yeeNkwenkwezi zeTwinkle I-LED yefestile yokubona ikhefu, i- $ 18, Amazon.com
Akunyanzelekanga ukuba usebenze ngekhekhe kulwamkelo lwakho ukuba awufuni. Ukuba uza kunikela ezinye iidessert zomtshato Njengamaqebengwana, iikeyiki okanye ii-donuts, zilungiselele kwezi bhokisi zerustic.
Ubugcisa bokuqala I-rustic yomtshato wekhekhe lomtshato, i- $ 10, Etsy.com
Yenza i-shabby chic vignettes kwindawo yakho yomtshato kunye nabaphathi bekhandlela. Bacwangcise ngee-accents ezongezelelekileyo ezinje ngee-succulents, iintyatyambo, iipayini kunye neetayi. Ukuba uyayithanda inkangeleko, sebenzisa umhombiso womtshato okhawulezileyo ukufikelela kwisidleke sakho emva komhla omkhulu.
Ivenkile yeKnot I-shabby chic spindle holder set set, i-41 yeedola eyi-3,
Kuzo zonke izimvo zomtshato ezi-rustic, le inokuba yenye yeentandokazi zethu. Sebenzisa izilayi zomthi ngayo nayiphi na into, ukusuka kumanani etafile ukuya kuseto okanye iipleyiti zesibheno. Ngenxa yokuguquguquka kwayo, olu luhombiso luhambelana nohlahlo-lwabiwo mali lufanele indawo kwinqwelo yakho yokuthenga.
Iingcezu zeRustic Wood iinkuni ezomileyo zomtshato, ukusuka kwi- $ 9, Etsy.com
Owayesakuba 'yiBachelor' Matt Grant Uyabandakanyeka: Ndonwabe Kakhulu Ngokutshata Oyena Mhlobo Wam
Mhlophe vs Ivory: Yintoni umahluko?
Izipho ezingama-30 ezingalibalekiyo ezivela kwiNtombi yokuHlonipha ukuya kuMtshakazi
Inqaku likaNina Dobrev Malunga noMhlobo oMhle kakhulu uJulianne Hough kunye neBrooks Laich bayakwenza Ukholelwe kuThando lwenene
I-Bachelorette's Alex Isabela kwizisongelo zaseChad: Andibonanga nto kuYe Imele uLwandle
Iingcamango zeGumbi lokuPhila leNdoda
Ibhasi yamantombazana eSpice evela 'kwiSpice yeHlabathi' ngoku yindlela yokhetho kwiqela lakho leBachelorette
Iindidi zeMigangatho yeHardwood (Isikhokelo sokugqibela)
Ngaba ndingaba nayo iMbaleki ye-Aisle yeMisitho yangaphandle?
IMaroon 5 yonakalisa uMtshato kwiFilimu yeVidiyo yabo eNtsha yoMculo! (Jonga iPics)
I-57 yoyilo lweSiqithi seKhitshi (Imifanekiso)
I-American Idol kaColton Dixon, uAnnie Coggeshall weDisney-Iifoto Zomtshato Ezenziwe Ngomxholo
Ihlobo le-cocktail ilungiselela umtshato
Isoftware yoyilo lwegaraji yasimahla
Isikhumbuzo seminyaka esi-8 semveli
unxiba umolokazana mfutshane ngaphambili umva omde
U-Bachelor Ben Higgins ucebisa ukuba angabaleka iOfisi: 'ULauren nam andikaqiniseki ngoku'
UAmanda Seyfried kunye noThomas Sadoski Yenza ukuBonakala kokuQala okuBomvu kweKhaphethi emva koMtshato oyimfihlo: Jonga iifoto
U-Essie Ulahle nje iNtsha, uMsitho womNayile wasePoland kunye neReem Acra: Jonga imibala